किन बढ्दैछ्न हत्या र अपराधका घटना ? यस्तो रहेछ वास्तविक कारण – Himalitimes
किन बढ्दैछ्न हत्या र अपराधका घटना ? यस्तो रहेछ वास्तविक कारण
२०७७ भाद्र २१ ०६:०६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामान्य मनमुटाव तथा लेनदेनसहित अवैध सम्बन्धका कारण हुने विवादले हत्याको रूप लिन थालेको छ । यस्ता हत्याका घटनामा परिवारसँग जोडिएका व्यक्ति, आफन्त र चिनजानका व्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान भएर प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएकासमेत पर्न थालेका छन् ।
लेनदेनको विषय अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र आफूले दिएको रकम सहजै फिर्ता नहुने अवस्थापछि माानिसले आवेगमा हत्याको निर्णयसम्म गर्ने गरेको ती प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् । यसैगरी, सामान्य विवादका कारण समेत परिवारभित्रकै व्यक्तिले परिवारकै व्यक्तिको हत्या गर्ने क्रमसमेत पछिल्लो समय बढेको छ । (राजदानी दैनिकबाट )
गरिबको नाममा धनि र नेताकै हालीमुहाली ,गरिब पहिचानकै नाममा राज्यको ७० करोड स्वाहा
One thought on “किन बढ्दैछ्न हत्या र अपराधका घटना ? यस्तो रहेछ वास्तविक कारण”
Binaskale biparita buddhi vaneko yehi ta hola ni jata pani marne ra marnne matra